Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Onye isi ọhụụ na -eburu Helm na Vail Resorts
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A ga -ahọpụta Kirsten Lynch ka ọ bụrụ onye isi nwanyị mbụ nke Vail Resorts
Lynch sonyeere Vail Resorts na 2011 dị ka onye isi ndị na -ahụ maka ịre ahịa yana onye nweburu ọkwa onye isi na PepsiCo na nri Kraft.
Kirsten Lynch, onye isi ahịa ahịa ugbu a, ka a họpụta ya onye isi nwanyị mbụ na onye otu Board nke Vail Resorts
Rob Katz, onye isi ụlọ ọrụ ugbu a, ka a ga -ahọpụta onye isi oche ndị isi.
Rob Katz ga -anọgide na -arụsi ọrụ ike ma na -etinye aka na mkpebi na atụmatụ dị mkpa nke Vail Resorts.
A ga -akpọ Ryan Bennett, onye osote onye isi ahịa ahịa ugbu a, onye isi ahịa ahịa nke Vail Resorts.
Ebe ezumike, Inc. taa mara ọkwa na a ga -ahọpụta Kirsten Lynch, onye isi azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ onye isi oche ma họpụta ya na kọmitii ndị isi ụlọ ọrụ, malite na Nọvemba 1, 2021.
N'oge ahụ, a ga -ahọpụta Rob Katz, onye isi ụlọ ọrụ ugbu a onye isi oche nke kọmitii ahụ ma na -agbasi mbọ ike ma na -etinye aka na mkpebi na atụmatụ dị mkpa nke Vail Resorts. Ọzọkwa, n'oge ahụ, a ga -akpọ Ryan Bennett, onye osote onye isi oche ahịa ugbu a, bulie ego ha ga enweta, ka ọ bụrụ onye isi ndị ahịa Vail Resorts.
Lynch sonyeere Ebe ezumike na 2011 dị ka onye isi ọrịre ahịa ma bụrụkwa onye isi ọkwa ndị isi na mbụ PepsiCo na Nri nri. Lynch bụ onye otu ndị isi oche nke Stitch Fix, Inc., na na 2019, a kpọrọ ya aha na ndepụta Forbes 'CMO Next, nke a ghọtara dị ka otu n'ime ndị isi ahịa mgbanwe egwuregwu iri ise kacha elu. Lynch toro na Chicago, na-eme ski mbụ mgbe ọ dị afọ isii ugbu a, Wilmot Mountain nwe Vail Resorts. Ya na di ya na ụmụ ya abụọ bi ugbu a na Boulder, Colorado.
Katz kwuru, "N'ime afọ iri ya na ụlọ ọrụ ahụ, Kirsten bụ onye na-ahụ maka mgbanwe na ihe ịga nke ọma na ahịa ahịa Vail Resorts na onye ọkwọ ụgbọ ala nke uto, nkwụsi ike na imepụta uru," Katz kwuru. "Na mgbakwunye na inwe ọmarịcha azụmaahịa dị egwu, Kirsten bụ otu n'ime ndị isi nwere mmụọ, ndị isi nke m rụtụrụla. Nnukwu ịnụ ọkụ n'obi ya maka ịdịte aka nke egwuregwu anyị yana nnukwu nkwa maka mmepe onye isi n'ime ụlọ ọrụ anyị ga-eme ka ọ bụrụ onye ndu pụtara ìhè na Vail Resorts. Otu ndị isi ga -agbakwa Kirsten gburugburu. "
Lynch kwuru, "Ọ bụ ihe nsọpụrụ idu Vail Resorts dị ka onye isi ala wee wulite ihe nketa Rob nke ịtụgharị uche na ahụmịhe ugwu." “Enwere m mmasị na ụlọ ọrụ a, ọdịbendị ndu anyị wuru na ndị ọrụ anyị 55,000 na -eme Vail Resorts onye isi ụlọ ọrụ. N'ile anya, enwere m obi anụrị maka ohere uto dị ịtụnanya maka Vail Resorts ma kpebisie ike ime ka egwuregwu anyị na ụlọ ọrụ anyị dị iche iche, gụnyere yana ịnweta. Anyị niile, anyị ga -azụlite azụmaahịa anyị, mepụta ihe ọhụrụ ma gaa n'ihu na -arụ ọrụ maka ebumnuche anyị nke ịmepụta ahụmịhe nke ndụ maka ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị. "